Madaxweyne Farmaajo oo wakhtigii ka sii dhamaanayo isagoo aamusan, muxuuse yahay qorshaha u qarsoon? - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Bulshada Madaxweyne Farmaajo oo wakhtigii ka sii dhamaanayo isagoo aamusan, muxuuse yahay qorshaha...
Madaxweyne Farmaajo oo wakhtigii ka sii dhamaanayo isagoo aamusan, muxuuse yahay qorshaha u qarsoon?
Iyadoo wax ka yar Saddex toddobaad ay ka dhiman tahay doorashaddii loo qorsheeyey inay Soomaaliya ka dhacdo 8-da Febraayo ee sanadkan ayna ka harsan tahay 18 maalmood oo keliya ayaa dad badani is weydiinayaan halka ay ku biya shuban doonto doorashadaasi.
Afartii bilood ee ina dhaafay ayaa suuqyada siyaasadda ee Soomaaliya si weyn looga arkayey hirdenka geesuhu kaga jajabeen Siyaasiyiinta Soomaalida ee qolo walbaa dooneysay inay guushu ku raacdo.
Haseyeeshee, waxaa caddaatay in gelgelin maran ay isugu soo hareen siyaasiyiintii xiliftanku ka dhexeeyey, ayna is arkeen iyadoo qoroxdu ay ku soo baxayso iyagoo aan faa’iido ka dhalin halgankoodii.
Dadka abla-abaleeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa rumeysan inay si fool xun ugu fashilmeen siyaasiyiinta Soomaalida ee doonaya inay hogaanka u qabtaan ummad 15 Milyan ka badan, maadaama aysan muuqan qorshe iyo nidaam uga degsanaa in dalkan doorasho xor iyo xalaal ah sidii looga qaban lahaa.
Doorasho ogol la isaga yahay waa inay ka dhacdaa Soomaaliya, sidaas waxaa qaba beesha caalamka oo rumeysan inay door muuqda ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya maadaama ay iyagu quudiyaan nidaamka dowladeed ee Soomaaliya, balse, aragtidan ayaa dad badani qabaan inay fursad siisay in siyaasi walba oo Soomaaliyeed uu makaroofanka istaago isagoo sheegaya inaysan jirin doorasho la isku raacsan yahay oo Soomaaliya u diyaarsan.
Madaxda maamuladda Goboladda Soomaaliya oo haddba heshiisyada ay la galaan Madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya uu gadaal kala xumaado ama uu mur iyo deebaaq kala kharaaraado, dabadeedna ay dib ugu celiyaan halkii ay sheekadu ka soo bilaabatay, iyagoo madmadow hor leh ka muujinaya heshiisyadii ay soo galeen.
Dad badan ayaa is weydiinaya sababta ay arrintaasi u dhacdo, balse waxaa xeel-dheerayaasha siyaasaduhu ay tilmaamaan in mar walba ay jirtay siyaasad khiyaameysan oo madaxda Dowladda Federaalka iyo Maamulada qaarkood oo is garabsanaya ay ku tuurayeen bohol dusha laga seesaabay Madaxda Gobolada qaarkood.
Isku daalneye maxaa noo dan ah?
Siyaasiyiinta madaxa adag ayaa u muuqda kuwo gacmaha kor u taagaya oo Alle ka baryaya inaysan dhicin doorasho xiligeedii ku timaada, taas bedelkeedana ay door bidayaan inay dagaal magaaladda Muqdisho kaga saaraan Madaxweyne Farmaajo iyo wiilka ay u ciil cuneen ee lagu magacaabo Fahad Yaasiin.
Madaxweyne Farmaajo ayaa isagu isu arka nin siyaasadda Soomaaliya miisaan weyn ku leh bulshadda badankeeduna ay taageersan yihiin, wuxuuna bushumihiisa ka ilaaliyey wax hadal ah toddobaadyadii ugu danbeeyey ee sanadkii la soo dhaafay iyo kuwa sanadka cusub, wuxuuna door biday ooraahdii oraneysay “Hadal Yar iyo Hawl badan”.
Qorshe iyo Qorshe la’aan.
Madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa doorbinka siyaasadeed u haysa ayaa haddba waxay majaraha doonta u weecinayaan dhinaca dabashu kaga imaaneyso, taasina waxay ina tuseysaa inay kalsooni ballaaran ku qabaan in aan ciddina siyaasadda uga adkaan karin.
Waxaa soo baxaya warar sheegaya in goor horeba Baarlamaankii wakhtigiisii dhamaaday loo qaybiyey kaarar aqoonsi oo sanadkan 2021 ay ku sii fadhin karaan kuraasta baarlamaanka.
Waxaa sidoo kale ay kalsooni baaxad leh ku qabaan Saddex maamul Goboleed ee Hirhabeelle, Galmudug iyo Koonfur gabeed Soomaaliya iyo weliba tiro Xildhibaano fara badan ah oo ay ku jiraan Guddoonka Baarlamaanku.
Farmaajo iyo Teemkiisa ayaa ah kuwo u muuqda inay ku raaxeysanayaan miisaanka siyaasadeed ee Soomaaliya hadba dhinaca uu u liico in iyaga faa’iido ugu jirto, kuwa khasaarayana ay yihiin maamulada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah.
Balse, maamulada Puntland iyo Jubbaland, Madaxweynayaal hore iyo Siyaasiyiinta mucaaradka ah iyagu waxay doonayaan oo keliya in la waayo doorasho xiligeedii ku dhacda si ay Laba arrimood midkood u helaan.
In Madaxweyne Farmaajo iyo xulufadiisa ay ku yeeriyaan buun dhawaq dheer wixii ka danbeeya 8-da Feb. 2021, xiligaasoo ay ku eg tahay mudadii hogaanka dalka loo doortay Muddane Farmaajo, taasoo aan la aqoon waxa ka dhalan doona.
Inay ogoladaan mudo kordhin bilo ah oo loo sameeyo dowladda Farmaajo si ay fursad ugu helaan inay isku soo abaabulaan si ka wanaagsan xaaladda ay xiligan Mucaaradku ku sugan yihiin, dhaqaale ahaan iyo hogaan ahaanba.
Maxaa dhici kara haddii doorasho dhici weydo?
Tani waa su’aasha ay dad badani is weydiinayaan, waxaana dadka intiisa badani ay u muuqdaan kuwo ka soo daalay collaado iyo dagaallo sokeeye oo dalka ka dhaca, waxayna rumeysan yihiin in collaad dhacda aan ciddina caano ka maalli doonin, ayna tahay in aan bulshadda rayidka ahi colaad danbe u durbaan tumi doonin, balse ay ka door bidayaan in Madaxweyne Farmaajo uu kursiga ku soo fadhiyo.
Balse, waxaa jira kooxo tiro yar oo siyaasiyiinta mucaaradku ay dabada ka soo riixayaan oo ay doonayaan inay ku muquuniyaan Madaxweyne Farmaajo sidii looga saari lahaa Madaxtooyada Villa Soomaaliya.
Beesha Caalamka ayaa iyaguna ka digay in aan ciddina u hanqal taagin in la tumo durbaanada collaaddeed, maadaama waddanka laga soo celiyey meel adag oo ay iyagu dhaqaale tiro badan ku bixiyeen.
Arrintu siday doonto ha ahaatee, waxaan rajeynaynaa sida wanaagsan in Alle ku dhameeyo xaaladda Soomaaliya ee qalafsan.
WQ: Maxamed Siciid Cumar (Kaashawiito)
Previous articleAxmed madoobe & wakiilada beesha caalamka oo khadka telefoonka ku wadda hadlay
Next articleRoba launches Sh110m kitty for needy students
A resurgence of unionism in Northern Somalia
Waayihii Dahabiga ahaa 1960-meeyadii Afgaanistaan waxaa u bedelay Rabshadihii 70-meeyadii
Hassan Mohamud - September 19, 2021
A top general admitted the United States had made a "mistake" when it launched a drone strike against suspected Islamic State militants...
South Yemen rocked by protests as rial plummets and food prices...
World Bank forecasts Somalia’s economy to grow at 2.4 pct in...
Haftar hires former Republican lawmaker and an ex-Clinton aide as lobbyists
Mursal opposes swearing of new security minister
‘It’s possible’: US military chief could work with Taliban on IS...
Ethiopia’s Tigray rebels looting aid supplies, US agency says
The Maritime Elections of Somalia